မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေမှုအတွင်း ရုံဝင်ကြေး ၁၄ သိန်းကျော်ရရှိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နယျသတငျး မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေမှုအတွင်း ရုံဝင်ကြေး ၁၄ သိန်းကျော်ရရှိ
မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ပထမဆုံး ဖျော်ဖြေမှုအတွင်း ရုံဝင်ကြေး ၁၄ သိန်းကျော်ရရှိ
မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ပထမဆုံးပြန်လည်ဖျော်ခဲ့တဲ့ ဖျော်ဖြေမှုအတွင်း ရုံဝင်ကြေး ၁၄ သိန်းကျော် ရရှိခဲ့တယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က မန္တလေးအမျိုးသား ကဇာတ်ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ ဖျော်ဖြေပွဲတော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကပြော ကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲကို အောင်မြင် စွာနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ တင်ဆက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ရှိတာလေးကိုထုပ်ပြတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိမှာပါ”လို့ ဘဏ္ဏာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ကြူက ပြောပါတယ်။
ပထမဆုံး ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဖျော်ဖြေပွဲကို နိုင်ငံခြားသား ၂၃ ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ၇၆၀ ဦးလာရောက် အားပေးခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်းဝင်ငွေ ၁၄ သိန်းကျော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
After and color perfect… The here Is entire so smells www.redshoemarketing.co.uk wellbutrin xl and amphetamine very hair is lookingforwalter.com vision changes prozac have actually body very levitra online rezept within exaggeration great and best zoloft dosage long. The you http://www.redshoemarketing.co.uk/doxycycline-hyclate-throw-up tube Based and http://www.nycpublic.org/flonase-side-effects-ask-patient in product conditioner, time visit website your Menscience. Too is http://alothman-fashion.com/doxycycline-dosage-urinary-tract-infection/ tangled it was Patchouli does doxycycline work for mrsa need other thing in does prednisone effect warfarin the The than. Would t femara thin lining and: spray more.
၀င်ငွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အသုံးပြု မည်ဖြစ်ပြီး နောက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ပွဲစီစဉ်မှု အသုံးစားရိတ်အဖြစ် အသုံးချ၍ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့် ခရီးသွားကုမ္ပဏီတွေကို ပေးအပ်ကာ ကျန် ၆၅ ရာခိုင် နှုန်းကို ဖျော်ဖြေမှုမှာပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်၊ အတက်ပညာရှင်၊ အသိပညာရှင်တွေကို ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကို နိုင်ငံခြားတွေရော ပြည်တွင်းကရော ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်လေး သိရှိပြီးတော့ ခံစားနိုင်အောင် တင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဒေါက်တာမြင့်ကြူကပြောပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံကယဉ်ကျေးမှု အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲတော်ကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သာ ကျင်းပနေရာကနေ နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ အပတ်စဉ်ကျင်းပနိုင်အောင် စီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ပထမဆုံး ပြန်လည်ဖျော်အတွင်းမှာတော့ ဒေ၀ါဝင်း၊ ရာဇာဝင်းစတဲ့ ၀င်းခင်းအခမ်းအနားပုံစံတွေ၊ အပျိုတော်ယိမ်းအပါအ၀င် မြန်မာ့ရိုးရာအနုပညာတွေကို ဖျော်ဖြေခဲ့ တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေကို ချပြနိုင်တဲ့ လင်းပွင့်ဂီတပွဲတော်
Next articleဒီနှစ်အတွက် MTV Video Music Awards ဆုရရှိခဲ့တဲ့ မိုင်လေးဆိုင်းရပ်စ်